Tantara an-tsarimiaina ‘South Park’ Nampiseho Ny Filohan’i Shina Manoroka Vehivavy. Iza Io Vehivavy Io? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Novambra 2015 15:01 GMT
Vakio amin'ny teny Català, русский, Español, Italiano, English
Pikantsary tao amin'ny tantara faha-19, fizarana faha-6 amin'ny “South Park”.
Nipoitra tao amin'ny tantara an-tsarimiaina Amerikana ho an'ny olondehibe South Park ny filohan'i Shina Xi Jinping tamin'ny faran'ny volana Oktobra. Amin'ny fifikiran'ny seho amin'ny endrika tsy mety ara-politika, nosokirin'ny fizaram-potoanan'ny tantara tao ny yaoi Japoney na kolontsain-tantara an-tsary “fitiavan-jazalahy” sy ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'i Shina, i Japana ary i Korea Atsimo
Ny Yaoi dia karazana tantara an-tsary malaza eo amin'ny tanoravavy aziatika mamelabelatra fifandraisam-pelaka nofinofisiny eo amin'ny mpiantsehatra lehilahy. Nahitana mpianatra Aziatika mitondra ny kolontsaina yaoi ao amin'ny South Park ny tantara tamin'ny herinandro lasa teo tamin'ny alalan'ny fizarana sary nonofinofy misy an'i Tweek sy Craig, mpianatra roa lahy any an-tsekoly. Manomboka mihevitra ny olon-drehetra ao an-tanàna fa pelaka izy roa ireo na dia tsy izany aza no izy.
Amin'ny fotoana iray, ny rain'ny mpiara-mianatra amin'i Stan, tsy mahafantatra ny amin'ny yaoi, niantso an-telefônina ny filohan'i Shina Xi Jinping hanontany ny fomba fanapahan-kevitry ny Aziatika amin'ny hoe iza no pelaka ary iza no tsia. Namaly i Xi, “Avy any Japana izany” ary “alika tsy mety miala tsiny amin'ny Repoblika Shinoa ireo.” Inona koa, tamin'ny fiafaran'ny tantara mitohy, manoroka ny sekreterany miteny Koreana tao amin'ny biraony ny filoha Shinoa.
Navandravandran'ny hagagana amin'ny tantaran'ny South Park ny Shinoa mpijery. Nanjavona vetivety tamin'ny aterineto ao amin'ny firenena ny piratin'ny orizinalin'ny tantara ary hita antserasera ankehitriny ny dika nanesorana ny fitenenana “alika” sy ny fifanorohana.
Niahiahy ireo Shinoa mpankafy ny South Park fa mety hanaitra ireo manampahefan'ny fampielezan-kevitra ao amin'ny firenena mba handràra ny sarimiaina tsy hiparitaka amin'ny aterineto ny fahitana ireo singa saro-pady ara-politika.
Ho an'ny tsy Shinoa, angamba ny fanehoan-kevitra “alika” no tena fihantsiana indrindra:
oadray lety e, ahitana ny filohan'i Shina miantso ny olona Japoney ho alika ny tantaram-pelaka south park
Na izany aza, tsy miraharaha izany ny ankamaroan'ny mpijery Shinoa, mahita ny fanamarihana toy ny marina ara-politika. Ny oroka amin'ny tantara no heverin'izy ireo fa nihoa-pefy.
Iza ilay vehivavy ao amin'ny biraon'ny filoha?
Manambady an'i Peng Liyuan i Xi Jinping. Saingy azo antoka fa tsy vadin'i Xi ilay vehivavy mpilalao miteny Koreana ao amin'ny biraony, izay tsy niseho tamin'ny tantara talohan'ity fizarana ity. Nampiseho ilay vehivavy toy ny sekreterany, izay toa mampihevitra fa misy ny fiarahana ivelan'ny fanambadiana ny Wiki South Park. Raisina ho kolikoly ao anatin'ny hetsika fampielezan-kevitra miady amin'ny kolikoly ao amin'ny firenena izany fihetsika izany, ary natahotra ny mpiserasera fa mety hahatonga ny tantara ho voaràra izany :
Mifanoroka amin'ny sekretera amin'ny farany, tahaka ny manampy solitany amin'ny afo.
Nilaza ireo mpankafy ny South Park fa tsy sekretera tsotra fotsiny ilay vehivavy, fa raha ny marina dia filohan'i Korea Atsimo, Park Geun-hye izay hita taratra hatrany hatrany ny fifamatorany akaiky amin'i Shina. Ara-tantara, nanana fifandraisana ratsy i Japana, Shina sy Korea Atsimo – nanafika an'i Korea Atsimo sy Shina nandritra ny Ady Lehibe Faharoa i Japana; nandritra ny Adin'i Korea (1950-1953) nanatevin-daharana ny tafika Koreana Tavaratra i Shina mba hiady amin'ny tafika Korea Tatsimo tohanan'i Etazonia. Tao anatin'ny folo taona, tsy mitsahatra ny fifandirana ara-paritra eo amin'ireo firenena telo ireo. Kanefa, manjary fahavalo iraisan'i Shina sy Korea Atsimo i Japana.
Tao amin'ny Twitter, nanasongadina ny vaovao vao haingana momba ny fihaonana an-tampon'i Shina-Japana-Korea Atsimo i @SlowZhu mba hanehoana fa tena i Park ilay vehivavy:
Azo antoka fa ity ilay vehivavy norohan'ny mpiantsehatra nanao Jinping tamin'ny South Park.
“Lavitry ny fanaovana hasomparana mihitsy izany”
Mety hampisy olana eo amin'ny fandaharana ny fanehoana ny fifandraisana diplomatika tahaka izao. Tao amin'ny sehatra media sosialy malaza Weibo, niahiahy ny mety hahazo ny South Park ao Shina ny mpankafy. Niaro ny fandaharana amin'ny fanazavana ny fahasamihafana eo amin'ny vazivazy sy ny hasomparana ny sasany:
Ny olana dia ny fiafaran'ny tantara rehefa norohan'ny mpanjaka amin'izao fotoana ny vaditsindranon'ny amperora Ramatoa Geun.
Natao hanaovana tsinontsinona ny firohotry ny kolontsaina yaoi ny tantara mitohy amin'ny ankapobeny. Nipoitra segondra am-polony monja i Xi ho fanesoesoana ny ady ara-diplomatika hitakiana ny fialan-tsinin'i Japana tamin'ny Ady Lehibe Faharoa. Mampiseho ny fifandraisana tsy mazava eo amin'i Shina sy Korea Atsimo ny fifanorohana amin'ny farany. Natao hojeren'ny olondehibe ny sarimiaina, nipoitra tamin'ny tantara farany ihany koa ny filoha Mao. Lavitry ny fanaovana hasomparana mihitsy izany.
Ampy izay … tsy fanaovana hasomparana ny ampira Shina ny tantara. Raha mihevitra izany ianao, dia mora tohina loatra ianao na tsy mpankafy ny South Park. Tsy hainao ny fiasan'ny esoeso lalaovina amin'ny South Park. Nandritra ny Lalao Olaimpika 2008, dia niresaka ny tahotra Shinoa izany ary nipoitra imbetsaka i Mao. Tokony efa tamin'izany no nivoaka ny fandraràna.
Manoloana ny fanentanana ao amin'ny firenena hiarovana ny tanora Shinoa amin'ny “fanolikolen'ny” sivilizasiona tandrefana, maro amin'ny mpankafy Park South no kely finoana ary miezaka mitroka izay tafajanona tamin'ny tantara an-tsarimiaina amin'ny aterineto:
Mahasosotra, nihevitra aho fa ity no farany … efa nasorin'ny Sou TV daholo ny zava-drehetra taorian'ny andiany faha-12… Tsy maintsy mitady loharanom-baovao antserasera hafa hotrohana azy aho…